Wondershare Dr.Fone Maka iOS Review - Best Wondershare Dr.Fone maka iOS Reviewof7
Nnọọ Nnọọ Mma Mmemme site yousef Amir
M na-achọ usoro ihe omume na-agbake m whats ngwa Ama ozugbo o kwere omume Mgbe ahụ, m hụrụ gị ụmụ okorobịa .. unu bụ n'ezie ezi ịhụnanya unu
Ekele :) site Henry
Ọfọn Nke a na usoro mma mgbe ahụ itunes n'ihi na m na itunes Nwela rapaara na adịrị software na wont weghachi iphone na a usoro ị nwere ike iweghachi enweghị adịkwa gị data ya ngwa ngwa na mfe onye ọ bụla kwesịrị ịzụta a usoro!
OMG! Daalụ! Site James
OMG Daalụ, na-ekele gị, na-ekele unu! M nwere ONE Cheta na m iPhone na mmadụ na mberede ọkọdọ-ehichapụ. Ọ bụ nna ukwu paswọọdụ maka Dashlane; na dị ka anyị niile maara, Dashlane adịghị nwere nna ukwu paswọọdụ mgbake maka isi nche ihe mere (nke dị mma n'ezie). Gbalịrị 2 ọzọ software omume n'ihu onye nke a, na ọ dịghị onye n'ime ha nwere mgbake ike onye a nwere. Echere m na atọ bụ na oge amara! A ga-azụ maka onye ọ bụla na mkpa nke mberede data mgbake na ihe ọ bụla iPhone, iPod, ma ọ bụ iPad!
Wondershare Dr.Fone Site agọnahụ
Zuru okè !!! A na ngwa nyeere m aka n'ezie ~!)))
Zuru okè site ADSON MARTINS
M masịrị dị ka Apple onwe ya bụghị natara m furu efu foto, na nsọ Dr ekwentị gbakee. tụfuru ihe nile na-enweghị azụ elu, na-enweghị ihe ọ bụla, m na-eme a idozi na ọ bụghị chetara ịzọpụta, m na-akpọ apple ma gwa m na ọ gaghị ekwe omume agbake photos enweghị azụ elu ... fọrọ nke nta na-anwụ anwụ, Ewoo achọpụta usoro ihe omume. Na-ekele gị.
Dr. Fone site J. Boyle
Magburu onwe mfe iji ngwaahịa. M nnọọ thankfull na m bụ ike naghachi data mmadụ na mberede ehichapụ. M ukwuu nwere ike ikwu ngwaahịa a.
Mr site James
Best ngwaahịa mgbe !!!!!!!!!!!! The m ụlọ ahịa gwara m na ọ bụ niile furu efu na-apụghị natara ... Amụma ha na-ezighị ezi :-)
ebube site m
bara uru karịa ka ọtụtụ ndị ọzọ omume
M furu efu m niile m foto na Wondershare Dr ekwentị natara bụla obere ihe! Site Thais Ribeiro
M nwere banyere 1100 Foto ndị dị na m iphone 5s ọhụrụ, pụrụ iche na foto nke njem ná mba ọzọ na anniversaries na e naanị zọpụta ya. Ruo otu ụbọchị, mgbe m na-akpọ ekwentị na PC itunes ọ jụrụ m ma m chọrọ iji weghachi ndabere ma ọ bụ chekwaa ya dị ka a ọhụrụ iPhone. Olee otú m nke abụọ ikpe ma ama na echekwa dị ka ọhụrụ ateriormente na kọmputa, m kpebiri na m iji weghachi ya, ọ bụghị na-eche echiche ziri ezi mgbe m ghọtara, ama weghachiri eweghachi ochie ntọala nke mbụ m ikpe ma ọ bụrụ na e nwere ndị niile foto m. Ekwu obi nkoropụ! M na-etiku na iwe ihe o mere, n'ihi na ọ dịghị mgbe kụziri elu na m itunes 5s, na mgbe nwere àgwà nke na-azọpụta m akwụkwọ m na iCloud. Nke ahụ bụ mgbe enyocha internet m chọpụtara na ndị Wondershare Dr.fone. Ọzọkwa chọpụtara na m setịpụụrụ m cell ka ya onwe ya azụ ruo na iCloud site n'oge ruo tempos.Eis abịa a olileanya. Dr. ebudatara Wondershare Phone, na mgbe jụrụ "naghachi ndabere faịlụ iCloud" akpatre ndabere ama ụbọchị abụọ tupu "ọdachi" nke ahụ bụ mgbe "n'ụzọ ọrụ ebube" ihe omume jisiri naghachi m nile 1114 photos !!! Ọ bụghị naanị na foto dị ka ihe niile m ọzọ akwụkwọ. Chaị, ihe a enyemaka. Ezi ihe e Wondershare Dr. Fone. Nnọọ na-eso ihe omume na-ajụ. Super mfe iji. Recomendadissimo obi abụọ adịghị !!
Photo mgbake iphone site Miguel
Fantastic. Jisiri naghachi niile furu efu photos na nkwalite nke IOS, nke nwere dịghị ndabere (iCloud, wdg). Ọzọkwa natara ọzọ na-adịbeghị anya kọntaktị, WhatsApp mkparịta ụka. Zuru okè 5 *. M nwere ike ikwu
<Na Mbụ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ọzọ